Tag: marketing bluetooth | Martech Zone
Tag: marketing amin'ny Bluetooth
Amin'ny maha-mpanazatra varotra ahy dia miara-miasa amin'ireo orinasa amin'ny indostria maro karazana aho. Ary saika ny orinasa rehetra iarahako miasa dia mandany bebe kokoa amin'ity taona ity noho ny tamin'ny marketing amin'ny Internet, anisan'izany ny media sosialy. Mampalahelo fa maro amin'ireo orinasa ireo no manomboka miasa ny marketing amin'ny Internet ary mahazo antso sy mailaka avy amin'ireo mpividy mafana fo nahita sy nanara-dia azy ireo tamin'ny Internet izy ireo. Saingy mahatsikaritra fironana mampiahiahy izy ireo, ny marketing
Rehefa nihalehibe aho dia notezain'ny optimista sy pessimist iray, ny reniko angamba no olona nahafinaritra indrindra nahafinaritra ahy indrindra afaka nifanena taminao. Nataony izay hahazoana antoka fa notezaina tamin'ny toe-tsaina be dia be aho, tsy naniry na inona na inona afa-tsy ny tsara ho an'ny rehetra ary manao izay fara heriko mba hanampiana ny olona hivoaka. Rehefa nanomboka nianatra sy matotra aho dia nanontany azy ny antony manampy ny olona sasany izay tena tsy tiany ary ny valiny
Tamin'ity herinandro ity aho dia tokony nanatrika fampisehoana mahafinaritra momba ny Demandbase Stream ?. Demandbase Stream dia rindranasa Adobe AIR izay mamela anao hanara-maso ny fivezivezena amin'ny Internet amin'ny fotoana tena izy. David Lieberman, filoha lefitry ny fampandrosoana ara-barotra dia namaritra ny Demandbase Stream: Demandbase Stream no rindrambaiko tsy misy mpitety tranonkala voalohany ahafahan'ny mpivarotra sy ny mpivarotra mahita izay orinasa mitsidika ny tranokalan'izy ireo, inona ny zavatra mahaliana azy ireo ary iza no hifandraisany Amin'ny alàlan'ny fisintomana
Betsaka ny olona mijery ny fanefitra tranonkala mahazatra ary mahita tranokala manondro antso ho amin'ny asa izy ireo ary avy eo mandrefy izany Call to Action amin'ny alàlan'ny Analytics, izay miantso azy io ho fiovam-po. Raha hanintona an'io ianao dia toa izao: Ny olana, mazava ho azy, ny tranokalan'ny Analytics amin'ny tranokala misy firavaka data miafina izay tsy misy olona mijery na manararaotra. Matetika, ampiasaina ny Analytics